January 2016 - Vanoda Zvinhu
Posted on Jan 31 Mar 01
Ndaive ndakagara zvangu panze ndichirohwa zvangu nemhepo ndiri pasi pemuti muyard yepaden pandaigara kumusha. Ziso raipota richidongorera kunzira yaive pedyo ndichitarisa zvangu majaya aipfuura neroad achienda kumashops aive pedyo. Paive pasina durawall. Kaingova kahedge kengovhara mahwani semughetto. Pakapfuura Rodgers aigara muline rimwe chete nesu. Aingonzi brother Rodgers nenyaya…
Kukwira Getty weMazigaro nemaZizamu paParty
Getty invited me to this party at her house but I think aida kuti tisviranae.I offered to help in the kitchen so that ndimudhume mazigaro nemazizamu ndobva ndati imistake. Handina kuita disappoint ndakumusvirwa for days. Getty ndi single mother anotoshanda day and night kuti zvinhu zvake zvimuitire and…
Mukomana wangu aigara kuHarare ini ndichigara kuBulawayo, ndakaenda kunomuona for the weekend and takasvirana kakawanda asi there was one time ndakanakirwa ndikaona nyenyedzi. Takaenda out kuimwe sports bar kwaibhoiwa and I kept telling him handei kumba so after a few drinks takaenda kuFlat rake. Ndakaenda kunogeza ndikapfeka maPjs…
Posted on Jan 28 Mar 01
Kubatwa naThembeka Ndichisvira Shamwari Yake muSwimming Pool
Ndiri murume ane makore 26 ndinonzi Tinashe, ndaigara hangu pane imwe flat muJoburg and was sharing neumwe musikana aishandira kuPretoria. Zvakaitika musi uyu takaswera takagara pamba watching TV, kwaipisa zvokuti apa Thembeka had said her friend Thuli aiwuya to spend time naye. Takagara hedu drinking and then Thuli…
Posted on Jan 27 Mar 01
Musikana wangu aigara achingonzwa kuda kusvirwa everytime. Tainge tichangopedza hedu our college diplomas and we decided kuenda on a holiday trip to Australia. Tasara ne hour rekuenda kuAirport takasvirana and by the time we were boarding ainge akutoda kusvirwa zvakare. Naturally, we checked out the plane’s bathroom tikaona…
Posted on Jan 27 Mar 04
Tainge tabooker room pakafancy lodge, takapotsa tabvarura hembe nenyere yatainge tinayo. Ndakamumbundira iye akachindibata magaro takarara pabed. My hair was a tangled mess, as he had run his hands through it so many times, I had lost count. Mboro yake yainge yakamira ichindiguma guma pabeche rangu zvaiita kuti…
Kurohwa ne Nyoro na Joe taenda kulake
It was supposed to be a blind date but the way things reached to this point I didn’t know. Ndanga ndakatobatirira wena this man achizvambura mbutu yangu kunge achabhadharwa afterwards. My work friend had hooked me up with this guy because she complained that I don’t have a…
Posted on Jan 25 Mar 04
Making love with brother yemurume wangu Bamunini Fainos
Babamudiki kubva musi watasvirana vakatanga kuita kunyara kushoma. He was very romantic asikana, ndoda hangu kutenda. Ndofunga mhuri yavo vaivewo vaka pihwa chipo chekuva very attentive and caring to the women in their lives. I have to believe chipo nokuti kune mimwe misha vakadzi vemo vano jandaidzwa zvikuru.…
Posted on Jan 22 Mar 04
Kudya Murume wangu Blambi for the first time
I am a woman ane makore 27 and ndane 6 years ndaroorwa, ndaingonzwa madzimai achiti murume anoyamwiwa mboro nekupurizirwa machende ndaingoti kutaura kwemahure. Nezuro ndakazoti regai ndizvi traye. Pakauya murume kubva kubasa akasvika ndikamupa sadza apedza kudya ndichibva ndaisa mvura yokugeza tikaenda kunogeza tese tapedza ndakabva taenda kunorara…
Posted on Jan 21 Mar 04
Kune vachiri kurangarira mai vaya vandakazokwapura palodge yekuMidrand kuno kuMzansi kwandakazosangana nekamuPede kaishandapo kasingade kupfuurwa nezvinhu senhunzi ) Ndakatowarairwa zvangu ndakazonzwa ndapinzirwa phone nekanjani kaya kekulodge kuMidrand (S.A) ndikati hekani waro,ndookubasa! Pasina nguva ndakabva ndapinda mumota,ndini uyo,R21 route ndakananga kuTembisa frm Boksburg..Sezvo kachimoko kaiva pa off kakabva kanditi…